Antony folo mahazatra indrindra amin'ny fiovan'ny ra sy lenta amin'ny diabeta-ary ny fitsaboana amin'ny diabeta
Antony folo mahazatra indrindra amin'ny fiovan'ny haavon'ny glukose ao anaty
Fotoana: 2020-02-19 Hits: 224
Ny marary diabeta sasany dia sosotra tokoa, na dia tsy isalasalana aza fa manao ezaka be izy ireo amin'ny fifehezana henjana ny sakafo, misotro zava-mahadomelina mifandraika amin'ny ora / fatra ilaina ary manao fanatanjahan-tena tsy tapaka, dia miovaova hatrany ny haavon'ny glucose ao anaty toy ny toetr'andro amin'ny lohataona. Raha ny tena izy, ny fiovaovan'ny haavon'ny glucose ao anaty ra dia misy fiatraikany amin'ny zavatra maro. Saingy, sarotra kokoa ho an'ireo mararin'ny diabeta ny mitady antony irery. Androany dia misy ny antony mora tsy raharahina ary fintinina toy izao.
Alohan'ny hahatonga anao ho sosotra be dia azonao atao ny manamarina ireo anton-javatra ireo aloha hahitanao ny antony fiovaovan'ny haavon'ny glucose amin'ny ra ary hanomezana fitsaboana simika!
Rehefa sakafo maro na sakafo tokana loatra no raisina dia hiovaova ny haavon'ny glucose ao anaty ra.
Tena takatra ilay taloha. Rehefa sakafo maro no raisina dia akora maro no voaova ho glucose, ary noho izany dia mora mipoitra ny gliokaozy postprandial.
Ity farany dia tsy azon'ny olona maro atahorana. Ohatra, raha vary fotsiny no alaina, dia avo dia avo ny glucose ao aorian'ny postprandial, ary mipoitra koa ny hypoglycemia alohan'ny fahavitan'ny sakafo. Raha ampifanarahana amin'ny ambaratonga sasany ny firafitry ny sakafo (toy ny fanampiana tsara ny hena mahia, ny fitomboan'ny legioma maitso ary ny fampidirana tsaramaso ho vary), hifehezana tsara ny glucose amin'ny ra aorian'izay.
Noho izany, ny glucose amin'ny ra aorian'ny fampandehanana dia mety ho lasa avo be aorian'ny sakafo be loatra na sakafo tokana be loatra no raisina.
2. Tsy ampy rano
Rehefa tsy ampy ny tsiranoka amin'ny vatana dia hiakatra ny glucose amin'ny ra, satria miakatra ny fatran'ny gliokaozy amin'ny fifindran'ny rà. Toy ny fomba mahazatra, ny fisotroana rano 8 vera isan'andro dia mety amin'ny ankamaroan'ny marary diabeta, saingy mbola betsaka ny rano ilaina rehefa marary ny diabeta manana endrika vatana lehibe kokoa na habetsahan'ny fanatanjahantena lehibe kokoa.
Ny tsiranoka amin'ny glucose amin'ny ra dia mety ho voarebirebin'ny fanafody sasany. Ohatra, ny fiakaran'ny haavon'ny glucose ao anaty ra dia ateraky ny fanafody toy ny hormonina, ny fanabeazana aizana, ny anti-depresseur sasany, ny fanafody anti-psychotic ary ny diuretika hafa.
Noho izany, alohan'ny hitondrana zava-mahadomelina vaovao, dia tokony holazaina ny fepetra momba ny glucose amin'ny ra, ary tokony hifampidinika ireo mpitsabo na mpitsabo.
4. Fotoana fe-potoana
Ny hyperglycemia aorian'ny fifohazana amin'ny maraina dia mety ho diabeta mellitus maraina. Amin'ny 3:00 ~ 4:00 maraina, ny hormonina mitombo sy ny hormonina hafa dia avoaka hanaitra ny vatan'olombelona; ny fahatsapana ny olombelona amin'ny insuline dia ateraky ireo hormonina ireo hiteraka hyperglycemia amin'ny maraina.
Na izany aza, raha ny insuline na zava-mahadomelina be loatra amin'ny fifehezana glucose amin'ny ra dia nalaina tamin'ny alina lasa teo na raha tsy ampy ny sakafo nalaina tamin'ny alina lasa teo dia mety hitranga ny hypoglycemia ny maraina.
5. Tsingerina amin'ny vanim-potoana
Ny glucose amin'ny ra ao amin'ny vehivavy dia mety miovaova noho ny fiovan'ny hormona mandritra ny vanim-potoana mialoha ny fotoana. Noho izany, raha miakatra tsy tapaka ny haavon'ny glucose amin'ny mararin'ny vehivavy diabeta ao anatin'ny herinandro alohan'ny tonga fotoana, tokony ahena ny habetsahan'ny gliosida, na mila fanazaran-tena bebe kokoa.
6. Torimaso tsy ampy
Ny torimaso tsy ampy dia tsy manimba ny fihetsem-po fotsiny, fa manelingelina ny glucose amin'ny ra. Tamin'ny fanadihadiana holandey iray, raha ampitahaina amin'ireo ampy torimaso, dia nihena 20% ny fahatsapana insuline raha 4 ora monja ny torimaso natokana ho an'ireo marary voan'ny diabeta mellitus karazana 1.
Amin'ny toetr'andro tafahoatra (na mangatsiaka na mangatsiaka be ny andro), dia hisy fiantraikany amin'ny fifehezana ny glucose amin'ny ra.
Amin'ny fahavaratra mamaivay dia hiakatra ny mararin'ny glucose ao anaty amin'ny mararin'ny diabeta sasany, saingy mety hidina ny mararin'ny diabeta hafa (indrindra ireo izay mampiasa insuline). Noho izany, amin'ny andro mahamay dia tsy tokony hivoaka ireo mararin'ny diabeta, ary tokony harahi-maso akaiky ny fiovan'ny haavon'ny glucose ao anaty.
Mandritra ny vanim-potoana fitsangantsanganana dia mety tsy takatry ny saina ny olona fa mihinana sakafo, zava-pisotro ary manao hetsika bebe kokoa. Ny haavon'ny glucose ao anaty ra dia voataonan'ireo antony ireo.
Ankoatr'izay, ny fiovan'ny asa sy ny fialan-tsasatra dia hanakorontana ny fandaharam-potoanan'ny fitantanana, hanelingelina ny fahazaran-tsakafo sy ny torimaso ary hisy fiantraikany amin'ny fifehezana ny glucose amin'ny ra. Noho izany, mandritra ny vanim-potoana fitsangatsanganana, ny fanovana ny haavon'ny glucose ao amin'ny rà dia tokony harahin'ireo mararin'ny diabeta matetika.
Ny kafeinina amin'ny zava-pisotro dia hampitombo ny valin'ny olombelona amin'ny gliosida ary amin'izay dia hiteraka fiakaran'ny glucose aorian'ny ra. Araka ny asehon'ny fandinihana ny oniversite Duke Amerikanina, taorian'ny fihinanana kafeinina 500 mg (mitovy amin'ny 3 ~ 5 kaopy kafe), ny haavon'ny glucose amin'ny rà dia nitombo 7.5% isan'andro eo ho eo amin'ireo marary voan'ny diabeta mellitus karazana 2.
10. antsipirian'ny fandrefesana glucose amin'ny ra
Alohan'ny handrefesana glucose amin'ny rà dia tsy maintsy hosasana ny tanana (indrindra aorian'ny fikasihan'ny sakafo), raha tsy izany dia mety hisy fangarony sandoka satria ny metatra glucose amin'ny ra ankehitriny dia mora tohina ary ny siramamy voadona amin'ny hoditra dia handoto ny santionan'ny rà. Araka ny asehon'ny fanadihadiana iray, ny sanda refesina amin'ny glucose amin'ny ra dia farafahakeliny 10% avo indrindra amin'ny 88% n'ny mpandray anjara nanala ny hoditr'akondro na nanapaka ny paoma noho ireo tamin'ireo tanana nanasa ireo. Ny refy marina amin'ny glucose amin'ny ra aza dia vokatry ny menaka fanosotra sy ny hoditra.
Pejy mialoha: Torohevitra fito lehibe tokony hatao aorian'ny fijaliana diabeta
Pejy manaraka: Inona no tokony hodinihintsika amin'ny fanatanjahan-tena?